शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ हत्या घटना : नेपालमा द्वन्द्व सकिएको छैन ! « Sansar News
शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ हत्या घटना : नेपालमा द्वन्द्व सकिएको छैन !
२४ मंसिर २०७७, बुधबार १४:४८
काठमाडौं । तत्कालिन नेकपा माओवादी हतियार बिसाउँदै मुल धारको राजनीतिमा समाहित भएको पनि झण्डै १५ वर्ष हुन लागेको छ । हतियार बिसाउने मुल नेतृत्व अहिले सरकारमा छ । तर, द्वन्द्वकालका जस्तै घटनाहरु भने फेरि देखिन थालेका छन् ।
मंगलबार मोरङमा भएको शिक्षक हत्याको घटनाले फेरि द्वन्द्वकालको सम्झना गराइदिएको छ । साथै द्वन्द्वकाल सकिएको छैन वा कायमै छ भन्ने पनि देखाएको छ ।
द्वन्द्वकालमा जस्तै हत्याको जिम्मा
द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालिन सरकार पक्ष तथा तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षले लिने गर्दथे । व्यक्ति हत्याका घटनालाई दुवै पक्षले कारबाहीको संज्ञा दिन्थे ।
मिक्लाजुङस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्याको घटनामा पनि त्यस्तै देखिएको छ । तत्कालिन माओवादीबाट विभाजित बनेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको मेची–कोशी ब्यूरोले उक्त हत्याको जिम्मा लिँदै विज्ञप्ती नै निकालेकाे छ ।
तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्धमा जस्तै विप्लव नेकपाले शिक्षक श्रेष्ठको मृत्यु प्रतिकारका क्रममा भएको जनाएको छ । विज्ञप्तीमार्फत विप्लव नेकपाले शिक्षक श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीविरुद्व सुराकी गर्दै आएको र केहि नेताहरुलाई पक्राउ पनि गराएको बताएको छ ।
विप्लव नेकपाको मेची–कोसी ब्यूरो इन्चार्ज प्रताप नाममा हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रेष्ठले पार्टीविरुद्ध सुराकी गर्दै आएका थिए । २६ फागुन २०७६ को मेची(कोसी ब्यूरो बैठकमा प्रहरी बेलाएर दमन गराएका थिए । पटक(पटकका त्यस प्रकारका पार्टीविरोधी गतिविधि रोक्न र आफूलाई सच्याउन भनी सम्झाउन जाँदा पनि उग्र गतिविधि गरिरहेका थिए । उनलाई यस पटक पनि सम्झाउन जाँदा हतियार लिएर आक्रमण गर्न आइलागेकाले प्रतिकारका क्रममा निजको मृत्यु हुन गएको जानकारी गराइन्छ ।’
प्रतिबन्धपछि विप्लव समुहबाट भएको पहिलो घटना
सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेकपाको गतिविधि राजनीतिकभन्दा आपराधिक भएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय लिएको थियो ।
प्रतिबन्धको निर्णय यता विप्लव समुहका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारले पक्राउ गरेको छ । शीर्ष तहकै दर्जनौं नेता अहिले जेलमा छन् ।
यसबीच, सरकारी पक्षले गरेको भनिएको कारबाहीमा विप्लव नेकपाका २ जनाको ज्यान गएको छ । नेकपाको भोजपुरका विद्यार्थी नेता तीर्थराज घिमिरे २०७६ जेठ ८ मा मारिएका थिए भने सर्लाहीको पार्टी इन्चार्जसमेत रहेका नेता कुमार पौडेल २०७६ असार ५ मारिएका थिए । सरकार पक्षले दुवै घटना मुढभेडका क्रममा भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, यसबीच विप्लव समुहबाट कुनै व्यक्ति हत्याका घटना भएका थिएनन् । विप्लव समुहले प्रतिबन्ध अगाडि एनसेलको मुख्यालय नख्खुमा बम बिस्फोट गराएको थियो । जुन बिस्फोटमा १ जनाको ज्यान गएको थियो । तर प्रतिबन्धपश्चात डेढ वर्षको अवधिमा व्यक्तिको ज्यान जानेगरि विप्लव नेकपाले कुनै गतिविधि गरेको थिएन ।
मोरङमा भएको घटना प्रतिबन्धपश्चात विप्लव नेकपाले गराएको पहिलो घटना हो । जहाँ तत्कालिन माओवादीले चलाएको युद्धमा जस्तै गरि व्यक्तिको हत्या भएको छ ।
द्वन्द्वकाल सम्झाउने घटना देखियो, हामी सचेत छौं : गृह मन्त्रालय
मोरङ घटनाले द्वन्द्वकाललाई सम्झाईदिएको भन्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले विप्लव समुहप्रति गृह थप सचेत बनेको बताएका छन् । संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा उनले सुरक्षा निकायका गतिविधि थप सक्रिय हुने बताए ।
‘मोरङ हत्या घटना कता–कता द्वन्द्वकाल सम्झाउने खालको पनि छ, घटना प्रति गृह चिन्तित छ, उक्त समुहका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन र जनताको सुरक्षा गर्न सुरक्षा निकाय थप सक्रिय हुनेछ’, बुढाले भने ।
उनका अनुसार विप्लव समुहका गतिविधि सामान्यकृत नभएको हुनाले सरकार प्रतिबन्ध कायमै राख्ने योजनामा छ । गृह मन्त्रालय प्रतिबन्ध कायमै राख्ने र खुलम खुल्ला गतिविधि गर्न नदिने गरि नै अगाडि बढेको प्रवक्ता बुढाले बताए ।